KUBUNGAZWE USUKU LWABAPHILA NEBALA ELIMHLOPHE – Sivubela intuthuko Newspaper
Osesithombeni Mnuz Sgwili Richman Zuma ongomunye uphila ngebala elimhlophe
IMEYA yoMkhandlu weTheku, uKhansela Sipho Kaunda isihlanganyele nomhlaba wonke ekubungazeni usuku lwabantu abanebala eliMhlophe (Albinism). Lolu suku belukade lubungazwa ngomhlaka-13 kuNhlangulana.
Emizamweni yokubhekana ngqo nesihlava sokuhlukunyezwa kanye nokucwaswa kwabaphila naleli bala, uMeya weTheku, usehlanganyele nabaleli bala emhlabeni jikelele ekugqugquzeleni abahlali baseThekwini ekutheni nabo bangasali ngaphandle ekufuqweni kombhidlango wokukhunjulwa kwalolu suku olumqoka lwabaphila naleli bala.
Ingqikithi yale mibungazo beyithi: “Wadalelwa ukuqhakaza.” Ngenxa yokuvumbuka kweCorona kuhlalukile ukuthi indumezulu yedili lomculo yokubungaza abanaleli bala izobe iqhutshwa kusetshenziswa ezobuchwepheshe besimanje. Le mibungazo izobe ilumbaniswe nomthelela ongemuhle odalwe yiCovid 19.
IMeya uKaunda ithe kungumsebenzi wawo wonke umuntu okhona ukuqinisekisa ukuthi abaleli bala baphila ngaphansi kwezimo ezamukelekile emphakathini. Kuphindwe kuqinisekiswe ukuthi bayavikeleka ekuhlaselweni kwabo okunganasidingo.
“Ngonyaka ka-2008 inhlangano yezizwe i-United Nation yabeka ngokusemthethweni ukuthi abanebala eliMhlophe kumele bathathwe njengabantu abaphila nokukhubazeka. NjengoMasipala weTheku sesihambe ibanga elide ekuqinisekiseni ukuthi abantu abaphila nokukhubazeka nabo bayawathola amathuba ezinhlakeni ezahlukene.”
Eqhuba uthe: “Njengamanje uMasipala wethu uqashe abantu abangamaphesenti amabili abaphila nokukhubazeka. Abangaphezulu kwamakhulu amabili babe ngabanye ababandakanyeke ohlelweni lwethu lokucijwa kwezisebenzi. Bonke laba sibaqeqesha ngaphansi kwezinhlelo iContact Center Operation NQF Level 4 kanye neBusiness Adiministration nayo ewuLevel 4.”
IMeya ikugcizelelile ukuthi konke lokhu kuwukuzinikela koMkhandlu weTheku ekuhambisaneni nomthetho wokuqashwa wakuleli ekulekeleleni abantu abaphila nokukhubazeka ezindaweni zomsebenzi.
Kusenjalo uSgwili Zuma ongomunye wabaculi abanebala eliMhlophe unxuse ukuba bahlonishwe abantu abaphila naleli bala. Ubekhuluma kwisiteshi sikaMasipala weTheku. Ukuhlonishwa kwamalungelo abo kanye nokuphathwa kahle kwabo ngezinye zezinto athe zimqoka.
“Mayiphele le nto yokubulawa kwabantu abaphila nebala eliMhlophe. Sekuyisikhathi sokuthi nabo bathole ukwesekekwa abakudingayo,” usho kanje.
Uzwakalise ukukhathazeka ngesimemezelo uMasipala wase oLundi